အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ်အများစုကအလုပ်ရှာဖွေရေးနိုင်ပွဲများနှင့်အတူဂေါက်သီး
အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ်အများစုကအလုပ်ရှာဖွေရေးနိုင်ပွဲများ
အဆိုပါ LPGA Tour အစောပိုင်း 1950 ဝန်းကျင်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်, များပြားကြီးမြတ်ဂေါက်သီးသောအခြိနျကာလကိုကျော်လာနှင့်ကြပြီ။ ဘယ်သူမြားကသူတို့အလုပ်အကိုင်များအတွက်အများဆုံးပြိုင်ပွဲအနိုင်ရ? အဆိုပါထိပ်တန်း5နေသောခေါင်းစဉ်:
ကေသီ Whitworth 88 ကိုအနိုင်ပေး
ကို Mickey Wright, 82 ကိုအနိုင်ပေး
Annika Sorenstam 72 ကိုအနိုင်ပေး
Louise Suggs 61 ကိုအနိုင်ပေး
Patti Berg က, 60 ကိုအနိုင်ပေး
ကြောင်းထိပ်တန်း5အကြောင်းကိုထွက်ရပ်သောအရာစာရင်းသူတို့၏အမျိုးအလေး 1950 မှာသူတို့ရဲ့ LPGA Tour အလုပ်အကိုင်များကိုစတင်ခဲ့ကြောင်း, တကယ်တော့, Berg ကနှင့် Suggs မူရင်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည် (နှင့်ခရီးစဉ်ကိုပင်ကြိုတင်အရာရှိတဦးကိုအနိုင်ပေးအဖြစ် LPGA ရဲ့တည်ထောင်သူတို့ရဲ့အနိုင်ပေးအချို့ရေတွက်) ။
Whitworth ရဲ့နောက်ဆုံးအနိုင်ပေး 1980 ခုနှစ်သို့ရောက်လာသောနေစဉ်, တခြားသူတွေ '' အများကြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ဇာတ်လမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရား: အ LPGA ၏အတိမ်အနက်ကို, ကယခင်ဆယ်စုနှစ်၌ရှိ၏ထက်ယနေ့အများကြီးနက်ရှိုင်းတာဖြစ်တယ်, အထူးသဖြင့်ခရီးစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုမှနှိုင်းယှဉ်။ ထို Sorenstam ရဲ့ 72 ကိုအနိုင်ပေး ပို. ပင်အထင်ကြီးစေသည်။
အဆိုပါအပြည့်အဝ List ကို: LPGA Tour အလုပ်ရှာဖွေရေးနိုင်ပွဲများ
ဤရွေ့ကား 13 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြိုင်ပွဲအနိုင်ရသူကို LPGA သမိုငျးတှငျအပေါငျးတို့သဂေါက်သီးဖြစ်ကြသည်။ နာမည်တစ်ခုဘေးတွင်ကြယ်ပြထားသော (*) ဂေါက်သီးနေဆဲ LPGA ပြိုင်ပွဲများတွင်ကစားကြောင်းဆိုလိုသည်။ ကွင်းအတွင်းနံပါတ်တစ်ခုဗိုလ်ကြီးအတွက်အနိုင်ပေးများ၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကေသီ Whitworth - 88 (6)
ကို Mickey Wright - 82 (13)
Louise Suggs - 61 (11)
Patti Berg က - 60 (15)
Betsy ရောလ် - 55 (8)
နန်စီလိုပက်ဇ် - 48 (3)
ဂျိုအန်း Carner - 43 (2)
စန်ဒရာ Haynie - 42 (4)
Karrie ဝက်ဘ် * - 41 (7)
သူငယ် Zaharias - 41 (10)
ကာရယ်လ်မန်း - 38 (2)
Patti Sheehan - 35 (6)
Betsy ကဘုရငျ - 34 (6)
ဗက်ဒံယလေသ - ​​33 (1)
Pat Bradley - 31 (6)
ဇူလိုင်လ Inkster * - 31 (7)
မေီ Alcott - 29 (5)
ဂျိန်း Blalock - 27 (0)
Lorena Ochoa - 27 (2)
ဂျူဒီ Rankin - 26 (0)
Marlene Hagge - 26 (1)
Donna Caponi - 24 (4)
Marilynn စမစ် - 21 (2)
လော်ရာဒေးဗီးစ် * - 20 (4)
Inbee ပန်းခြံ * - 19 (7)
စန်ဒရာ Palmer က - 19 (2)
Holly Stacy - 18 (4)
Beverly Hanson - 17 (3)
Dottie ငရုတ်ကောင်း - 17 (2)
ဇန်နဝါရီ Stephenson က - 16 (3)
လုဒိ Ko * - 15 (2)
Sally Little က - 15 (2)
Suzanne Pettersen * - 15 (2)
ဘက်တီ Jameson - 13 (3)
rosy ဂျုံးစ် - 13 (0)
Liselotte နျူမန် - 13 (1)
ကို Double-ပုံကိုအနိုင်ပေးနှင့်အတူအခြားအ Active ကိုကစားသမား
Stacy Lewis က - 12
Paula Creamer - 10
1926 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: Ho-Hum, ဒါဟာ Hagen င်
AT & T က Pebble Beach တွင်အမျိုးသား Pro ကို-Am ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
1996 အမေရိကန်ပွင့်လင်း: ဂျုံးစ် Winners စာရင်းမှဒဏ်ရာရသူများစာရင်းထဲကနေသွား
1965 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: Marr Nicklaus, Casper ဟာ Off ထမ်းဘိုး
အဆိုပါ PGA Championship ပြိုင်ပွဲဖြတ်နည်းဥပဒေဆိုတာဘာလဲ
အမေရိကန်ပွင့်လင်း၏ပထမဦးဆုံး Native-မွေးဖွားခဲ့ပြီးအမေရိကန် Winner သူကားအဘယ်သူခဲ့သလား
ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ J ကို-1 မသန်စွမ်း Maestro primaria y က secundaria မသန်စွမ်း trabajar en ယူအက်စ်အေ
တစ်ဦးက Business ဗိုလ်မှူးရွေးချယ်နည်းအကြောင်းရင်းများ
ဒါဟာကျွန်မရဲ့ကားရပ်နားခြင်းသို့မဟုတ် Up ကိုပူနွေးဖို့အိုကေလား?
Matin နှင့်Matinéeနှင့်အတူပြင်သစ် Idiomatic ဖော်ပြချက်
Redox Indicator အဓိပ္ပာယ်
ဒါန: အ Theological သီလ၏အကြီးမြတ်ဆုံး
မမှန်ပြင်သစ် '' -ir '' ကြိယာ '' Offir '' Conjugate လုပ်နည်း
2008 ၏ထိပ်တန်း 100 Rap ဂီတသီချင်းများ
ဖိအားအောက်မှာရေးသား 8 လျင်မြန်စွာသိကောင်းစရာများ
Grammar နှင့် Logic အတွက် Amphiboly
Quotes ကျေးဇူးတင်ကြောင်း 'ဘုရားသခငျ, သင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်' '
ပတေရုသ Griffin 12 မဟုတ်သောဝတ်စုံ
PHP ကိုကျပန်း Quote
ဠာအပိုင်း6ကိုကြည့်ခြင်းအားသင်ထောက်ကူစာရွက်
ဂြိုဟ်တုအဆိုပါသမိုင်း - Sputnik ငါ